Faahfaahin: Dagaalka ka socda gobolka Tigray – Radio Daljir
Juunyo 23, 2021 11:34 b 0
Dagaaladan ayaa la sheegay inay u dhexeeyaan ciidamada falaagada Tigray iyo kuwa dowladda.
Xoogaga Fallaagada Tigray ee (TDF) ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen tiro magaalo ah halkaas oo dad goobjogayal ah ay BBC u sheegen inay arken dagalyahanada oo rondo sameynayo Milatariga itoobiya ayaa beeniyay waxayna ku tilmaamen warar been abuur ah.
Wararka dagaalka ayaa imanaya iyada oo ay socoto tirinta codadkii laga dhiibtay doorashadii guud ee Isniintii dhacday. Xaalada ammni awgeed, ma jirin wax codbixin ah oo ka dhacday Tigray.
Dad goob joogayaal ah ayaa sheegay in xoogaga falaagada ay magaalada istiraatiijiga ah ee Adigrat kasoo galeen dhanka xuduuda Eritrea, oo uu jirta 45 km (30 mayl). Haddii la xaqiijiyo, tani waxay noqoneysaa horumarkii ugu weynaa ee fallaagadan ay sameyso tan iyo markii uu dagaalku billowday.